Erlọ Ọrụ Mgbakọ Bogotá Ka Ukwuu: Mgbasa ozi ọhụrụ iji gosipụta Ike nke Ndị Mmadụ
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Colombia » Erlọ Ọrụ Mgbakọ Bogotá Ka Ukwuu: Mgbasa ozi ọhụrụ iji gosipụta Ike nke Ndị Mmadụ
Na nkwanye ugwu maka ụbọchị nzukọ nzukọ ụbọchị ụwa, BestCities Global Alliance ekwuputala ọkwa ọhụụ nkwukọrịta ọhụụ ga-egosipụta Ike Ndị Mmadụ. N'ịbụ onye Greater Bogotá Convention Bureau na-eduzi, bụ onye ga-anabata BestCities 2018 Global Forum na Disemba 9-12, ụlọ ọrụ ahụ amalitela mkpọsa nke na-achọ ime ememe pụrụ iche ndị mmadụ na-arụ n'ime mgbanwe dị ukwuu na ọganihu na nzukọ na ihe omume ụlọ ọrụ.
Tinyere ebe 11 ndị ọzọ BestCities na-aga, Bogotá ga-egosipụta isi okwu nke Global Forum nke afọ a na usoro ntanetị nke ga-eme ka ihe emetụ n'akụkụ ụwa niile. Nke a ga-abụ oge mbụ mmekorita ahụ kọwaara ndị na-ege ntị isiokwu a kwa afọ site na mmemme ha kwa afọ site na atụmatụ ezubere iche nke ga-ahụ ka obodo niile kekọrịta ozi ọnụ.
Movementgha ahụ ga-eme ka ndị mmadụ nwee nghọta na nghọta dị mkpa n'ime ụlọ ọrụ nwere ikike ịgbanwe. N'ime afọ abụọ gara aga, GlobalCities Global Forum lere anya na mmetụta nke ihe nketa na mkpa ọ dị iwulite àkwà mmiri ọdịbendị. N'afọ a, njikọta chọrọ iji hụ na ndị mmadụ bụ isi nke ihe niile.
Otu n'ime mkpọsa ahụ ga-ahụ obodo iri na abụọ nke obodo ndị BestCities, gụnyere Berlin, Tokyo, Vancouver, Madrid, Houston, Singapore, Melbourne, Dubai, Bogotá, Copenhagen, Edinburgh na Cape Town nke ndị mmadụ pụtara nye ha.
Linda Garzón Rocha nke erlọ Ọrụ Mgbakọ Gọọmenti Greater Bogotá kwuru, sị: “Anyị kwenyesiri ike na onye ọ bụla nwere ike ime mgbanwe dị mkpa nke pụrụ ịkpụzi ọdịnihu ma mee mgbanwe dị mma. Ndị mmadụ bụ isi ụlọ ọrụ a, ụlọ ọrụ a bụ arịa iji nweta mmetụta sara mbara na nnukwu. Dịka njikọ aka anyị chọrọ igosipụta ezi ike ndị mmadụ nọ n'ime ya ma kwenye na mgbasa ozi a ga-enyere anyị aka ime nke a.
Paul Vallee, Onye isi nchịkwa nke BestCities Global Alliance kwuru, sị: “Anyị na-eme ike anyị niile iji hụ na isiokwu nke Global Forum anyị lekwasịrị anya n’otu isiokwu dị mkpa nke mere na anyị nwere obi ụtọ na mmemme nke afọ a lekwasịrị anya na Ike Ndị Mmadụ. Ozi anyị chọrọ nkwukọrịta bụ na ndị mmadụ bi n'etiti ụlọ ọrụ a ma site na mkpọsa a, anyị nwere olile anya ịmuke ọtụtụ ndị na-akpali mmụọ na-arụ ọrụ iji meziwanye ụlọ ọrụ, ihe omume na ihe nketa anyị na-eke. Ike nke ndị mmadụ bụ isiokwu sara mbara nke nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara na anyị nwere obi ụtọ ịnwe atụmatụ iji wee kerịta echiche anyị n'ihe nke a pụtara obodo iri na abụọ kachasị mma n'akụkụ ụwa niile.
Oge otu n'ime mkpọsa ahụ ga-amalite site na 12 Eprel ruo 14 Mee na ọkwa nke abụọ ka a mara ọkwa n'oge na-adịghị anya.
Ndi otu BestCities na obodo ha na ha ga - abia na IMEX Frankfurt nke afo a. A ga-ekpughe ozi ndị ọzọ gbasara ihe a ga-atụ anya na afọ a Global Forum na-eme na Bogotá na Disemba na nri ụtụtụ mgbasa ozi na Tuesday 15th May na Maritim Hotel Frankfurt, nke dị n'akụkụ Messe Frankfurt.
Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu nke mmụọ na-ebupụta ọrụ ọhụụ na Cap-Haïtien, Haiti
RAI Amsterdam CEO malitere 'Amsterdam City of Drones' n'uche